Inona avy ireo soa azo avy amin'ny CBD? | Safidy fahasalamana tsara indrindra ho an'ny 2020
Tombontsoa azo avy amin'ny solika CBD
Tombontsoa marobe amin'ny solika CBD tohanan'ny porofo
Cannabidiol na CBD araka ny ahafantarana azy dia fanafody malaza ankehitriny. Ny tombotsoan'ny https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ dia maro ho an'ny aretina mahazatra maro. CBD dia iray amin'ireo cannabinoids 100 mahery hita ao amin'ny Zavamaniry sativa rongony.
Tetrahydrocannabinol (THC) no tena cannabinoid psychoactive hita ao amin'ny rongony, io no singa lehibe indrindra amin'ny rongony ary mahatonga ny fahatsapana ho “avo”. Tsy toy ny THC, ny CBD dia tsy psychoactive. Io toetra io dia mahatonga ny CBD ho safidy manintona ho an'ireo izay mitady fanamaivanana nefa tsy misy fiatraikany amin'ny marijuana. Ny menaka CBD dia vita amin'ny fitrandrahana ny CBD amin'ny zavamaniry rongony, avy eo alefa amin'ny menaka mpitondra toy ny menaka voanio na hemp.
Tombontsoa azo avy amin'ny CBD
Manala ny fanaintainana ny CBD: Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​misy rafitra iray antsoina hoe ny rafitra Endocannabinoid, izay mifehy ny asa maro ao anatin'izany ny fahazotoan-komana, torimaso ary ny valin'ny hery fiarovan'ny vatana. Ny vatana dia mamokatra neurotransmitter antsoina hoe endocannabinoids izay mifandray amin'ny receptor cannabinoid ao amin'ny rafi-pitabatabana. Araka ny fikarohana, ny CBD dia manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainana mitaiza amin'ny fiantraikany amin'ny asan'ny endocannabinoid mpandray izay mampihena ny fivontosana sy mifandray amin'ny neurotransmitter.
Ny CBD dia afaka mampihena ny fanahiana sy ny fahaketrahana: Ny fanahiana sy ny famoizam-po dia matetika voatsabo amin'ny zava-mahadomelina, izay mety hiteraka vokadratsin'ny vokadratsin'izany, toy ny fikorontanan-tsaina, torimaso, fikorontanana ara-nofo, tsy fahitan-tory ary aretin'andoha. Mety ho ny https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ menaka dia mety ho fitsaboana na amin'ny fitaintainanana na amin'ny fahaketrahana, manome ireo izay miaina miaraka amin'ireny aretina ireny ny vintana hahita vahaolana voajanahary. Ny CBD aza azo nampiasaina hitsaboana ny tsy fahitan-tory sy ny PTSD. Ireo tombon-tsoa azo avy amin'ny menaka CBD dia mifandraika amin'ny fahafahan'ny CBD mihetsika amin'ny mpandray ny serotonin, ny neurotransmitter izay mifehy ny toe-po sy ny fihetsika ara-tsosialy.
CBD mety hanana fananana Neuroprotective: Mino ny mpahay siansa fa ny iray amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny menaka CBD dia ny fahaizana miasa amin'ny rafitra endocannabinoid mety hahasoa ny olona mijaly amin'ny aretin-tsaina. Raha ny marina, iray amin'ireo fampiasana be fikarohana indrindra amin'ny CBD amin'ny fitsaboana aretin-kozatra toy ny epilepsy sy sclerose maro. Na dia somary vaovao aza ny fandalinana amin'ity sehatra ity, dia nisy fikarohana maromaro izay naneho valiny mahavelom-bolo. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ny olona sasany amin'ireto fanadihadiana ireto dia niaina ny vokany faharoa Fitsaboana CBD, toy ny tazo, havizanana ary fikorontanana. CBD ary Delta 8 THC amin'ny Bulk dia nodinihina ihany koa noho ny fananany mety amin'ny fitsaboana aretin-kozatra neurolojika maro hafa.
Afaka nanamaivana ny soritr'aretina mifandraika amin'ny homamiadana ny CBD: Ny iray amin'ireo tombony azo lazaina fa mampiady hevitra indrindra amin'ny menaka CBD dia ny manampy amin'ny soritr'aretina mifandraika amin'ny homamiadana. Ny azo antoka, na izany aza, ny CBD dia afaka manampy ny olona voan'ny homamiadana hiatrika ny voka-dratsin'ny fitsaboana homamiadana, toy ny maloiloy, fanina ary fanaintainana. Voalaza fa ny CBD dia mety hanana fananana miady amin'ny homamiadana. Na izany aza, tsy mbola misy porofo an'izany. Mila fikarohana fanampiny hanaporofoana ny fahombiazany.
Afaka nanampy ny CBD hampihena ny mony: Ny mony dia aretina amin'ny hoditra manodidina ny 10% amin'ny mponina. Izy io dia vokatry ny antony samihafa, ny bakteria, ny fivontosan'ny dermis, ny famokarana sebum be loatra, ary ny genetika mihitsy aza. Araka ny fikarohana siantifika farany natao, ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny menaka CBD dia ny manampy amin'ny fitsaboana ny mony noho ny fananana manohitra ny inflammatoire ary ny fahafahany mampihena ny famokarana sebum.
Mety mahasoa amin'ny fahasalaman'ny fo ny CBD: Ny fandinihana natao tato ho ato dia nampifandray ny CBD miaraka amin'ny tombontsoa maro ho an'ny fo sy ny rafi-pitetezana, ao anatin'izany ny fahaizana mampihena ny tosidra. Ny fiakaran'ny tosi-drà dia mifandraika amin'ny risika avo lenta amin'ny aretim-po, ao anatin'izany ny lalan-dra sy ny aretim-po. Ny fikarohana dia manondro fa ny CBD dia mety afaka manampy amin'ny tosidra ambony.
Tombontsoa hafa azo avy amin'ny solika CBD: Na dia ilaina aza ny fikarohana bebe kokoa, dia mety hanome tombony hafa ny CBD.
Fitsaboana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina: CBD dia heverina fa manova ny faritry ny ati-doha mifandraika amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina.
Vokatry ny aretin-tsaina: Ny CBD dia mety manampy ny olona schizophrenia sy ny aretin-tsaina hafa ary mampihena ny soritr'aretina psychotic.
Fisorohana diabeta: Tamin'ny fandinihana tamin'ny totozy, ny CBD dia nampihena ny trangan'ny diabeta mihoatra ny 50%.
Afaka mahazo avo ara-dalàna any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana ianao izao. Nosoratan'i Lifehacker
ManarakaNext post:CBD sy diabeta - fampiasana menaka CBD handanjalanjana ny siramamy ao | Vokatra tsara indrindra 2021